Ho Sahy amin’ ny Herim-po, sy ny Tanjaka ary ny Asa - Nataon’ ny Eveka Gary E. Stevenson
Ôktôbra 2012 | Ho Sahy amin’ ny Herim-po, sy ny Tanjaka ary ny Asa
Tiako ny hifantoka amin’ ilay toetra voalohany izay mamaritra azy ireo ho: “sahy [amin’ ny] herim-po.” Amiko, izany dia mamaritra ny fahazotoan’ ireo zatovolahy ireo mba hanao ny marina amin-kerim-po, na tahaka ny famaritana izay nolazain’ i Almà hoe: “hijoro ho vavolombelon’ Andriamanitra amin’ ny fotoana rehetra … sy amin’ ny toerana rehetra.”2Ireo zatovo miaramila 2.000 dia nanana fotoana betsaka nanehoana ny herim-pon’ izy ireo. Ianareo tsirairay ihany koa eo amin’ ny fiainanareo dia hanana fotoana manan-danja izay mitaky herim-po. Ny namako iray antsoina hoe John, dia nizara tamiko ny iray tamin’ ireo fotoana teo amin’ ny fiainany ireo.
Ry zatovolahy, tahaka an’ i John dia hisy ny fotoana izay tsy maintsy hanehoanareo ny herim-po marina anananareo, eo imason’ ireo namanareo, mety ho mahamenatra sy mahasorena ny ho fiantraikan’ izany. Ankoatra izany, amin’ izao tontolo misy anareo izay hanjakan’ ny teknôlôjia izao dia hisy koa ny ady hifanaovana amin’ ilay fahavalo eo amin’ ny sahan’ ady mangina sy manirery eo anoloan’ ny efijery. Ny teknôlôjia ankoatra ny tombontsoa entiny dia mitondra ihany koa olana izay tsy mbola niainan’ ireo taranaka talohanareo. Ny fanadihadiana iray natao vao haingana teto amin’ ny firenena no nahitana fa tsy any an-tsekoly fotsiny ihany no mampivarahontsana ny fakam-panahy mahazo ny zatovo ankehitriny fa any amin’ ny toerana fanaovana internet ihany koa. Izany koa no nahitana fa ireo tanora izay nijery sary maneho fisotroana toaka sy fampiasana zava-mahadomelina tao amin’ ireny tambazotra sôsialy eo amin’ ny internet ireny dia avo telo na efatra heny ny mety hahatonga azy ireny hirona amin’ ny toaka sy ny zava-mahadomelina ihany koa. Raha nanao fanamarihana mikasika io fanadihadihana io ny mpitantsoratra iray tao amin’ ny kabinetra tao amin’ ny governemanta Amerikana teo aloha dia nilaza hoe: “Io fanadihadihana tamin’ ity taona ity io dia nampiseho karazana fanerena mahery vaika amin’ ny fomba vaovao avy amin’ ny fiaraha-monina—dia ny fanerena ataon’ ny manodidina amin’ ny alalan’ ny teknôlôjia. Ny fanerena ataon’ ny manodidina amin’ ny alalan’ ny teknôlôjia dia mihoatra lavitra noho ireo naman’ ny ankizy iray sy ireo ankizy izay mifanerasera aminy. Manafika hatrany an-tokantrano sy ny efitrano fandrian’ ilay zaza izany amin’ ny alalan’ ny Internet.”4Ny fanehoana herim-po amim-pahamarinana dia matetika ho saro-takarina toy ny hoe hanao click sa tsia. Ampianarina ireo misiônera ao amin’ ny Torio ny Filazantsarako ny hoe: “Fomba lehibe handrefesana ny hatsaran-toetranao ny zavatra safidianao ho eritreretina sy ho atao rehefa irery ianao ary mieritreritra fa tsy misy mahita.”5Mahereza! Mahatanjaha! “Mitsangàna amin’ ny toerana masina ianareo ary aoka tsy hoesorina.”6
Ry zatovolahy, mampanantena aho fa hanome hery anao ny Tompo. “Fa tsy nomen’ Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery.”7Hamaly soa anao Izy amin’ ny herim-po sy ny fitondran-tena tsara ataonao—amin’ ny alalan’ ny fahasambarana sy fifaliana. Ny herim-po lehibe toy izany no ateraky ny finoanao an’ i Jesoa Kristy sy ny Sorompanavotany, sy ny vavaka nataonao, ary ny fankatoavanao ireo didy.
Hoy ny Filoha N. Eldon Tanner hoe: “Ny zatovolahy iray any amin’ ny sehatry ny sekoly dia afaka mitondra fiantraikany mahery vaika ho amin’ ny tsara. Ny zatovolahy iray izay ao amin’ ny ekipa mpanao baolina kitra, na any amin’ ny oniversite, na eo anivon’ ny mpiara-miasa aminy dia afaka manao soa sesehana amin’ ny alalan’ ny fiainany ny filazantsara, sy ny fanajany ny fisoronany, ary ny fijoroany hiaro ny marina. Matetika ianao no hahita fitsikerana betsaka sy fandrabirabiana eny na dia avy amin’ ireo izay mino ny zavatra inoanao aza, na dia mety hanaja anao aza izy ireo noho ny fanaovanao ny tsara. Kanefa tsarovy fa na ny Mpamonjy aza dia nampijaliana, noharatsiana, nalaim-baraka ary nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana nony farany satria tsy nety nohozongozonina tamin’ ny finoany. Efa mba nieritreritra izay mety ho nitranga ve ianao raha toa ka nihanalemy izy ka niteny hoe: ‘ O! Inona moa no ilàna izao e?’ ary tsy nanohy ny asany? Moa ve isika te-ho mpiala an-daharana, sa te-ho mpanompo feno fahasahiana na dia misy aza ny fanoherana maro sy ny faharatsiana eo amin’ izao tontolo izao? Handeha isika hanana herim-po hanao zavatra sy mba ho voaisa ho toy ny mpanara-dia marina sy feno fanoloran-tena an’ i Kristy.”8
Manasa anao aho, meteza ho mendrika tahaka ireo zatovo miaramila roa arivo izay nanana fahasahiana tamin-kerim-po amin’ ny maha-mpihazona fisoronana mendrika anao. Tsarovy fa ny zavatra izay ataonao, ny toerana izay halehanao, ary ny zavatra izay jerenao no hamaritra ny maha-ianao anao. Te-ho tonga olona ohatry ny ahoana ianao? Meteza ho diakona mendrika, ho mpampianatra mendrika, ary ho mpisorona mendrika. Mametraha tanjona mba ho mendrika ny hiditra ao amin’ ny tempoly amin’ izao fotoana izao, ary mba ho mendrika ny handray ny ôrdônansy manaraka amin’ ny taona mahamety izany, ary ny handray ny Fisoronana Melkizedeka any amin’ ny farany. Izany no lalan’ ny fahamarinana izay manasa ny fanampian’ Andriamanitra. Hoy ny Tompo hoe: “Koa miharihary ao amin’ ny ôrdônansiny ny herin’ ny toetra araka an’ Andriamanitra.”9
Hitarika anao eny an-dalana eny ireo ray aman-dreny, sy ireo mpitarika ao amin’ ny fisoronana ary ireo laharam-pahamehana araka ny faminaniana hita ao amin’ ny bokikely Devoir Envers Dieu (Ny Adidinao amin’ Andriamanitra) sy Jeunes Soyez Forts (Ry Tanora Mahereza).
“Manao antso avo aminareo aho mba handray fanapahan-kevitra … izao [ankehitriny] izao mba tsy hihataka amin’ ny làlana izay mitarika mankany amin’ ny tanjontsika: dia ny fiainana mandrakizay miaraka amin’ ny Raintsika any An-danitra.”10
Tahaka ny naneken’ ireo zatovo miaramila roa arivo ny antson’ i Helamàna izay mpitarika azy ireo mba hiady sy ny nandrindran’ izy ireo ny herim-po feno fasahiana nananan’ izy ireo, no ahafahanao manao toy izany amin’ ny fanarahana ny mpaminany mpitarika anao, dia ny Filoha Thomas S. Monson.
Ry zatovolahiko mpihazona ny Fisoronana Aharôna, eto am-pamaranana dia manolotra anareo ny fijoroako ho vavolombelona aho ny amin’ Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy, ary ny tenin’ i Joseph Smith manao hoe: “Ry rahalahy! Tsy hitozo ao amin’ ity tanjona lehibe tokoa ity va isika? Andeha handroso fa tsy hihemotra. Mahereza ry rahalahy, dia mandrosoa, mandrosoa mankamin’ ny fandresena!”11Amin’ ny anaran’ i Jesoa Kristy, amena.
Tantara manokana izay nolazaina tamin’ ny mpanoratra.
Joseph A. Califano, Jr., mpanorina sy filohan’ ny Ivotoerana Nasionaly mikasika ny Fiankinandoha sy ny Fampiasana Zava-mahadomelina ao amin’ ny Oniversiten’ i Columbia, tao amin’ ny vaovao navoaka mikasika ilay fikarohana, casacolumbia.org.
Torio Ny Filazantsarako: Boky Torolalana ho an’ ny Asa Misiônera (2004), 143.
N. Eldon Tanner, “For They Loved the Praise of Men More Than the Praise of God,” Ensign, Nôv. 1975, 74–75.
Thomas S. Monson, “Ireo F telon’ ny Safidy,” Liahona, Nôv. 2010, 67–70.
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 128:22.